Guddoomiye Cusub Oo Loo Magacaabay Gobolka Banaadir | raascasayrmedia.com
← Qaraxyo ka dhacay magaaladda Kampala oo ay ku dhinteen 67 qofood
Concise history and geography of Somalia →
July 13, 2010 · 4:31 pm
Madaxweynaha Dawladda Federaalka ee Soomaaliya Shariif Sheikh Axmed ayaa xilka ka qaaday Guddoomiyihi hore ee gobolka Banaadir Cabdirisaaq Maxamed Nuur oo loo yaqaanay Eng.Nuune,waxaana xilkaas loo magacaabay Guddoomiye cusub.
Guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna Duqa magaaladda Muqdisho ayaa waxaa loo magacaabay Maxamuud Nuur Tarzan,waxaana xaflad uu xilka kula wareegaayay lagu qabtay xarunta gobolka Banaadir ee magaaladda Muqdisho maanta iyadoo ay kasoo qaybgaleen masuuliyin ka tirsan Dawladda Federaalka.
Maxamuud Nuur Tarzan ayaa ka mid ah qurba joogta Soomaaliyeed,wuxuuna deganyahay dalka Ingiriiska gaar ahaan magaaladda London isagoo ka tirsan Baarlamaanka Dawladda Federaalka.
Mudane Tarzan ayaa xubin ka ahaa Ururka dib u xoreynta Soomaaliya oo u hogaamin jirey Sheikh Shariif ee fadhigiisu ahaa magaaladda Asmara ee dalka Eritrea,waxaana uu dhankaas kasoo galay Baarlamaanka Federaalka, sidoo kale waxa uu caan ku ahaa hoggaaminta mudaaharaadyadii looga soo horjeedi jirey dawladdii uu madaxweynaha ka ahaa Cabdullaahi Yusuf Axmed.
Lama yaqaano sababaha rasmiga ah ee ka dambeysay in xilka laga qaado Guddoomiyihi hore ee gobolka Banaadir oo mudo ku dhow lix bilood xilkaas uu hayey.